နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းလဲရာတွင် ပင်နီတိုက်ပုံ ဝတ်ရုံဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ မရကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား - Yangon Media Group
နိုင်ငံရေးစနစ်ပြောင်းလဲရာတွင် ပင်နီတိုက်ပုံ ဝတ်ရုံဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ မရကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
ပဲခူး၊ ဇူလိုင် ၆
နိုင်ငံရေးစနစ် ပြောင်း လဲရာတွင် ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်ရုံဖြင့် ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်ကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက ပြောကြားခဲ့ သည်။
ဇူလိုင် ၆ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တန်းကျေးရွာ ပန်းပျိုးလက် ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကြားရေးကျောင်း ၌ ပြုလုပ်သည့် သစ်ပင်ချစ်သူများဖိုရမ်တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဝင်းသိန်းက ”တိုင်းပြည်စီးပွား ရေးကို အခြေခံပြီးတော့ သီလတရား တွေ ပျက်ယွင်းနေတယ်။ စီးပွားရေးဦး မော့အောင် ပြန်လုပ်ဆောင်ဖို့ နိုင်ငံ ရေးစနစ်တွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေ ရတယ်။ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြန်ပြင် တော့ ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်ထားရုံနဲ့ မပြောင်း လဲပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ မပြောင်းလဲပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ပြည်သူများအနေ ဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမူ စိတ်နေစိတ်ထားများကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယဉ်ကျေးမူပုံသဏ္ဌာန်အား ပညာရေး ဖြင့် ယှဉ်တွဲပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ပညာရေးအား အထူးအလေးပေးပြောင်း လဲနေကြောင်း သိရသည်။
ဦးဝင်းသိန်းက ”ပညာဆိုတာ ကျောင်းမှာပေးတဲ့ပညာတင်မဟုတ်ဘဲ ဖိုရမ်တွေကနေလည်း ပညာတွေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဥပ ဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကလို တိုင်းပြည်ကို အာဏာတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်တဲ့ခေတ်၊ လက်နက် တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်တဲ့ခေတ်က အရိုင်းအစိုင်းတွေပေါ်မှာ ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံ ဖြစ်ပြီးတော့ အုပ်ချုပ်တဲ့သူကော၊ အုပ်ချုပ်ခံတဲ့သူကော အရိုင်းအစိုင်းဘဝနဲ့ ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရလို့ တိုင်းပြည်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အနေအထားမှာ ယနေ့ဥပဒေကို လွှမ်းမိုးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စား ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် တဲ့အခါ အသိပညာက အင်မတန်အရေး ကြီးပါတယ်။ အကြောက်တရားကို အ ခြေခံသည့် သဘောတရားများ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး အာဏာကိုအခြေခံကာအကြောက်တရားဖြင့် ဦးစီးသည့် သဘောတရားများကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများပျက် စီးခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့တွင် အသိတရားကို အခြေခံသည့် ဒီမိုကရေစီဝါဒသာလျှင် ကမ္ဘာတွင် အောင်မြင်နေပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ရှေးဦးစွာ ပန်းပျိုးလက်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ပညောဘာသက အဖွင့် သြဝါဒစကား မိန့်ကြားပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေ သကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် သယံ ဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန် ကြီးဒေါက်တာစောညိုဝင်းတို့က အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ကလေး-တမူးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဘုတ်ကန်ဈေးတန်းတွင် ရောင်းချနေသည့် ရာသီစာ တမူးမျှစ်ပေါင်းများ ရပ်ဝေးမြို့များအထိ တင်ပို့ရောင်းချ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရုက္ခဗေဒဌာန ပါမောက္ခဌာနမှူး ဒေါက်တာအေးဖေ ပညာရေးနှင့် သုတေသနကဏ္ဍတွင် စိတ်အားလူအား ထက်သန်စွာ မြှုပ်နှံထားသော ပါမောက္ခအယောက် ၁ဝဝ ဆုတွင် ပါဝင်ချီးမြှင့်ခံရ
ပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းကို ပူးပေါင်းကော်မတီ တင်သွင်းလာမည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် တစ်ပေါင်းတ??
FDA မှ ဒုတိယ ကြီးကြပ်ရေးမှူး အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲခံထားရသူက ပြစ်?
အမေရိကန် ရေတပ်သင်္ဘော ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှ ဖြတ်မောင်း
ကျိုက်သလ္လံစေတီတော် မြေထိန်းနံရံများ ဆက်လက်ပြိုကျမှု မရှိစေရန် ပြန်လည်ပြုပြင်နေ